အသကျ ၁၂ နှဈအရှယျနဲ့ BMW ကားကိုဝယျနိုငျခဲ့တဲ့ ကလေးမလေး – KK Daily News
အသကျ ၁၂ နှဈအရှယျနဲ့ BMW ကားကိုဝယျနိုငျခဲ့တဲ့ ကလေးမလေး
မင်ျဂလာပါ ပရိသတျကွီးရေ ဒီနမှေ့ာတော့ ခမျြးသာအောငျ ပိုကျဆံရှိ
အောငျ ဘယျလိုလုပျရမလဲဆိုသူတှအေတှကျ ယခုဖျောပွမဲ့
သတငျးရေးကို ဥပမာပွုပွီး အကွံပေးခငျြပါတယျ။ ဒါကတော့
ထိုငျးနိုငျငံက ကလေးမလေးတဈယောကျက အသကျ ၁၂ နှဈ
အရှယျမှာပဲ သူမကိုယျပိုငျဝငျငှဖွေငျ့ BMW ကားသဈကွီးကို ဝယျယူနိုငျခဲ့ပါတယျ။
ဘယျလိုအကွောငျးကွောငျ့ ဝငျငှကေောငျးလို့ ကားဝယျနိုငျတာလဲ
ဆိုတာကတော့ ဆကျလကျဖတျရှု့ပေးကွပါခငျဗြာ။ ငယျငယျက
နညျးကသူမက Make-up artist ပိုးပါခဲ့တဲ့ ကလေးမလေးတဈ
ယောကျပါ။ သူမဟာ အခုဆိုရငျ အသကျ ၁၂ နှဈပွညျ့သှားခဲ့ပွီး
သူမရဲ့မှေးနမှေ့ာတော့ သူမဝယျထားတဲ့ BMW ကားလေးကတော့
သူမဟာ အသကျ ၃နှဈအရှယျ ကတညျး ကနေ Make-up artist
ပိုးပါခဲ့သူတဈဦးဖွဈပွီး သုံးနှဈအရှယျပေါကျး ကလေးတညျးက
Social Media ပျေါမှာ အလှပွငျတဲ့ Video တှတေငျပွီး
အလှဖနျတီးရှငျအဖွဈ ရူးသှပျခဲ့ပါတယျ။ ဒါဟာသူမရဲ့ ငယျငယျလေးကတညျးက အိမျမကျပါ။
အသကျ ၃ နှဈအရှယျက အလှနျ ငယျလှနျးသေးတာ ကွောငျ့သူမ
မိဘတှကေ သူမအသကျ အသကျ ၇ နှဈအရှယျမှာ တော့သူ့ကို
လှပျလှပျလပျလပျ လလေ့ာသငျယူ ခှငျ့ပေးခဲ့ပါတယျ။ ဒီလို မိတျကပျပညာကို လလေ့ာရငျးနဲ့ ၂၀၁၈ ခုနှဈမှာတော့ the London
Fashion Week မှာပါဝငျခှငျ့ရခဲ့ပါတယျ။
ဒီအခြိနျကစပွီးတော့ သူမရဲ့ Instagramမှာ followers 40,000
YouTubeမှာ 282,000 subscribers နဲ့ Facebook မှာတော့
သနျးခြီ ပွီးသူမကို အားပေးသူမြား ရှိခဲ့ပါတယျ။ ဒီလိုအောငျမွငျမှု
ကွောငျ့ မကွာသေးခငျက ကရြောကျတဲ့သူမရဲ့ ၁၂နှဈပွညျ့ မှေးနေ့
မှာ သူမဟာ BMW ကားကွီးကို ကိုယျ့ကိုယျကိုယျမှေးနေ့
လကျဆောငျ အဖွဈ ပွနျ ပေးနိုငျခဲ့ပါတယျ။
သူမရဲ့၁၂နှဈပွညျ့ မှေးနမှေ့ာ အခုလိုဆုတောငျးစကားလေးနဲ့ ကြေးဇူးတငျစကား လေးကိုသူမက ပွောခဲ့ပါတယျ “Happy birthday to me. This year, I will be 12 years old. I’m thankful for everything I have so far. Thank you for always following and encouraging me. I love everyone very much. Thank you for all the blessings. May everyone be blessed, too.”
အဲ့ဒီမှာစာဖတျပရိသတျကွီးကို တဈခု အကွံပေးခငျြတာက ဝငျငှေ
ကောငျးဖို့အတှကျဆို အရငျဆုံး ဝါသနာအရငျးခံရပါမယျ၊ ပွီးရငျ
တော့ မိမိကိုယျတိုငျ စိတျဝငျတစားနဲ့ ကြှမျးကငျြအောငျ သငျယူရပါ
မယျ၊ နောကျအရေးကွီးဆုံးတဈခကျြကတော့ မိဘတှပေါ မိဘ
တှကေ ကလေးတှရေဲ့ တကျခငျြစိတျကို မပိတျပငျရငျ၊
မွတေောငျမွှောကျပေးရငျ ကလေးတှကေ အားတကျပွီးကွိုးစား
ရငျး အောငျမွငျလာကွတာပါ။ အဲ့အခြိနျမှာ မိဘက ပိုကျဆံကုနျတဲ့
အလုပျမို့ လကျထဲလညျးမရှိဘူးရငျး ရငျးလညျးမရငျးနိုငျဘူးဆို အဲ့
ကလေးက စိတျဓာတျကပြွီး မအောငျမွငျတော့ပါဘူး။ အခုဖျောပွ
ပေးခဲ့တဲဘကလေးမလေးက သူမရဲ့ငယျရှယျ စဉျတညျးက
ဝါသနာပါမှုကို ဆကျလကျကွိုးစားနိုငျခဲ့တာရော၊ ဒီလိုကလေးတဈ
ယောကျရဲ့အိမျမကျကို လဈြလြူမရှုပဲ ကူညီ ပေးခဲ့တဲ့ သူမရဲ့
မင်္ဂလာပါ ပရိသတ်ကြီးရေ ဒီနေ့မှာတော့ ချမ်းသာအောင် ပိုက်ဆံရှိအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုသူတွေအတွက် ယခုဖော်ပြမဲ့ သတင်းရေးကို ဥပမာပြုပြီး အကြံပေးချင်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံက ကလေးမလေးတစ်ယောက်က အသက် ၁၂ နှစ်အရွယ်မှာပဲ သူမကိုယ်ပိုင်ဝင်ငွေဖြင့် BMW ကားသစ်ကြီးကို ဝယ်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့် ဝင်ငွေကောင်းလို့ ကားဝယ်နိုင်တာလဲ ဆိုတာကတော့ ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ပေးကြပါခင်ဗျာ။ ငယ်ငယ်ကနည်းကသူမက Make-up artist ပိုးပါခဲ့တဲ့ ကလေးမလေးတစ်ယောက်ပါ။
သူမဟာ အခုဆိုရင် အသက် ၁၂ နှစ်ပြည့်သွားခဲ့ပြီး သူမရဲ့မွေးနေ့မှာတော့ သူမဝယ်ထားတဲ့ BMW ကားလေးကတော့ သူမရဲ့ ကိုယ်ပိုင်လက်ဆောင်လေးပါ။
သူမဟာ အသက် ၃နှစ်အရွယ် ကတည်း ကနေ Make-up artist ပိုးပါခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး သုံးနှစ်အရွယ်ပေါက်း ကလေးတည်းက Social Media ပေါ်မှာ အလှပြင်တဲ့ Video တွေတင်ပြီး အလှဖန်တီးရှင်အဖြစ် ရူးသွပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါဟာသူမရဲ့ ငယ်ငယ်လေးကတည်းက အိမ်မက်ပါ။
အသက် ၃ နှစ်အရွယ်က အလွန် ငယ်လွန်းသေးတာ ကြောင့်သူမ မိဘတွေက သူမအသက် အသက် ၇ နှစ်အရွယ်မှာ တော့သူ့ကို လွပ်လွပ်လပ်လပ် လေ့လာသင်ယူ ခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒီလို မိတ်ကပ်ပညာကို လေ့လာရင်းနဲ့ ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာတော့ the London Fashion Week မှာပါဝင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။
ဒီအချိန်ကစပြီးတော့ သူမရဲ့ Instagramမှာ followers 40,000 YouTube မှာ 282,000 subscribers နဲ့ Facebook မှာတော့သန်းချီ ပြီးသူမကို အားပေးသူများ ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုအောင်မြင်မှုကြောင့် မကြာသေးခင်က ကျရောက်တဲ့သူမရဲ့ ၁၂နှစ်ပြည့် မွေးနေ့မှာ သူမဟာ BMW ကားကြီးကို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မွေးနေ့ လက်ဆောင် အဖြစ် ပြန် ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
သူမရဲ့၁၂နှစ်ပြည့် မွေးနေ့မှာ အခုလိုဆုတောင်းစကားလေးနဲ့ ကျေးဇူးတင်စကား လေးကိုသူမက ပြောခဲ့ပါတယ် “Happy birthday to me. This year, I will be 12 years old. I’m thankful for everything I have so far. Thank you for always following and encouraging me. I love everyone very much. Thank you for all the blessings. May everyone be blessed, too.”
အဲ့ဒီမှာစာဖတ်ပရိသတ်ကြီးကို တစ်ခု အကြံပေးချင်တာက ဝင်ငွေကောင်းဖို့အတွက်ဆို အရင်ဆုံး ဝါသနာအရင်းခံရပါမယ်၊
ပြီးရင်တော့ မိမိကိုယ်တိုင် စိတ်ဝင်တစားနဲ့ ကျွမ်းကျင်အောင် သင်ယူရပါမယ်၊
နောက်အရေးကြီးဆုံးတစ်ချက်ကတော့ မိဘတွေပါ မိဘတွေက ကလေးတွေရဲ့ တက်ချင်စိတ်ကို မပိတ်ပင်ရင်၊
မြေတောင်မြှောက်​ပေးရင် ကလေးတွေက အားတက်ပြီးကြိုးစားရင်း အောင်မြင်လာကြတာပါ။
အဲ့အချိန်မှာ မိဘက ပိုက်ဆံကုန်တဲ့အလုပ်မို့ လက်ထဲလည်းမရှိဘူးရင်း ရင်းလည်းမရင်းနိုင်ဘူးဆို အဲ့ကလေးက စိတ်ဓာတ်ကျြ မအောင်မြင်တော့ပါဘူး။
အခုဖော်ပြပေးခဲ့တဲဘကလေးမလေးက သူမရဲ့ငယ်ရွယ် စဉ်တည်းက
ဝါသနာပါမှုကို ဆက်လက်ကြိုးစားနိုင်ခဲ့တာရော၊ ဒီလိုကလေးတစ်ယောက်ရဲ့အိမ်မက်ကို လျစ်လျူမရှုပဲ ကူညီ ပေးခဲ့တဲ့
သူမရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မိသားစုအသိုင်းဝိုင်းကြောင့် ယခုလိုအောင်မြင်လာတာဖြစ်ပါတယ်လို့ ပြောပါရစေ…